Vono olona tsy niniana natao :: Vehivavy maty voatifitry ny zandary • AoRaha
Vehivavy iray, 31 taona, no namoy ny ainy vokatry ny fanapoahan’ny zandary basy tamin’ny fandaminana ny savorovoro niseho tany Antsirabe II, tamin’ny alarobia teo. Tovolahy iray, 17 taona, kosa no naratra ary manaraka fitsaboana any amin’ny hopitaly. Efa nanokatra fanadihadiana momba an’ity raharaha ity ny Zandarimaria, any Antsirabe, miaraka amin’ny famotorana an’izay zandary niavian’ny tifitra tsy nahy.
Ady sy fifamaliana teo amin’ny olona mpihavana sady iray tanàna, tany Fiherenantsoa, Soanindrariny, any Antsirabe II, no nahatonga ny zandary niditra an-tsehatra, mba ho fandaminana ny savorovoro. Voalaza ho niainga avy amin’ny ady lova izany disadisa niafara tamin’ny fahafatesana olona izany.
« Nampandrenesin’ny lehiben’ny fokontany tamin’ny fisian’ny lehilahy iray mampihorohoro eo an-tanàna sady mandrahona ho faty ny havany izahay.Tonga teny ny zandary saingy norahonan’ io lehilahy io ihany koa. Nisy antsibe teny an-tanany. Voatery nampiasa basy ho fampitandremana azy ny zandary, saingy niantefa tany amin’ny olona roa, anisan’ireo nitangorona teo amin’ny manodidina, ny bala », araka ny fanazavana azo avy amin’ny Zandarimaria any Antsirabe.
Nentina namonjy hopitaly haingana ireo naratra. Tsy tana vokatry ny fahaverezan-dra be loatra ny ain’ilay vehivavy.
Fantatra fa zanak’anabavin’iry lehilahy nanakorontana iryio maty voatifitra io. Fianakaviany ihany koa ny tovolahy iray naratra.
« Tsy misy ny olona notazonina atao andrimaso tamin’iny raharaha iny. Mpihavana rahateo ireto niharamboina ka aorian’ny fahavitan’ny fandevenana no hanaovana ny fanadihadiana rehetra. Fantatra tamin’ny angom-baovao natao teo an-tanàna fa efa malaza ho maherisetra sy mpanakorontana ilay lehilahy niantsoana zandary », hoy ihany ny mpanao famotorana.
Voka-panadihadiana tany Antsirabe :: Matin’ny entona misy poizina izy enina mianaka